Hadalladii madaxda caalamiga ay ka jeediyeen caleemo-saarka iyo wixii aan ka ogaanay - Caasimada Online
Home Warar Hadalladii madaxda caalamiga ay ka jeediyeen caleemo-saarka iyo wixii aan ka ogaanay
Hadalladii madaxda caalamiga ay ka jeediyeen caleemo-saarka iyo wixii aan ka ogaanay
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa Goordhaw soo dhammaaday xafladda caleemo-saarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ka socotay garoonta Aden Cadde.
Xafladda waxaa ka soo qeyb-galay labadii madaxweyne ee Farmaajo ka horreeyay, guddoonka labaqa aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaanno, wasiirro iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada.
Dhinaca kale, waxaa xafladda ku sugnaa sida la sheegay illaa 125 dal wufuud ka kala socota, waxaana ka mid ahaa: Madaxweynaha Djabuti: Ismacil Cumar Geelle, Madaxweynaha Kenya: Uhuru Kenyata, Ras’iaul wasaaraha Itoobiya: Heile Mariam Desleign, madaxweyne ku xigeenka Suudaan Xasbu Maxamed, Wasiirka arrimaha dibadda ee Tanzania Augustine Mahiga, wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Masar ee arrimaha Afrika: Xamdi Sanad, wakiilka xogheyaha guud ee Jaamacadda Carabta Khalif ibrahim, ergeyga Jaamacadda Carabta: Maxamed Cabddalla Idris, Wakiilka qaramada midoobay Mechael Keating, Ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Madeira, Ambassador Stephen Schwartz oo ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo safiiro kale
Khudbadaha xafladda laga soo jeediyay, hambalyada ka sokow, waxaa wehliyay in madaxda iyo dalalkaas ay ballan-qaadeen in ay garab istaagayaan dowladda Farmaajo.
Heile Mariam Desleign: Ra’iisul wasaaraha Ethiopia waxaa uu sheegay in Soomaalida ay taariikh dhigeen, waxaa uu ka hadlay in Soomaalida uun ay go’aan ka gaari lahaa mustaqbalkooda, waxaa uu Farmaajo ku bogaadiyay doorashada isagoo ballan-qaaday in isaga iyo shacabkiisa ay garab istaagaan sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa. Desleign waxaa uu Soomaalida ku taliyay in ay noqdaan mid xagga wanaagga u socota, waxaa uuna u hambalyeeyay madaxweyne Farmaajo.
Uhuru Kenyata: Madaxweynaha Kenya waxaa uu xafladda ka sheegay in doorashada Soomaaliya ka dhacday ay tahay doorasho lagu faano, waxaa uu ku dheeraaday sida isaga iyo dowladdiisa ay xiriir soke ula yeesheen Soomaalida.